Uphononongo lweNest, i-thermostat ehlakaniphile yokulawula ukufudumeza | Androidsis
Uhlalutyo lweNest: iThermostat etshintshe iMigaqo yoMdlalo
UPablo Ortega | | Izaziso, Reviews
Ukuba unayo i-thermostat ekhaya, lixesha lokuba uyijongile kwaye wayimamela. Ngokuqinisekileyo khange umbone ixesha elide. Eso sixhobo sifunyenwe ezindongeni zamakhaya ethu iya kungabonakali amaxesha amaninzi. Sifuna ukonga umbane kwaye singavuli imeko yomoya okanye ukufudumeza. Siyonqena ukuvuka ebhedini ukuya kuvulela umoya oshushu ukuba ubandayo. Okanye asifuni nje ukuyilayita, kuba emva koko simka ekhaya kwaye silibale ukuyicima.
Kuzo zonke ezi ngxabano ubeka isisombululo Indlwane, i-alfabhethi ye-thermostat efanelekileyo (Google) eyilwe yingqondo efanayo esisizisele i-iPod: UTony Fadell, kwaye ngubani othe kamva wagqiba kwelokuba angene kwintengiso eyahlukileyo, eyekhaya elinobuhlakani.
Emva kweminyaka eliqela yempumelelo e-United States, i-Nest iye yafika kwimakethi yase-Yuropu ukuze yoyise amakhaya ethu kwaye, ingxelo yayo ibonisa, ukuba inethuba elihle lokufezekisa injongo yayo.
0.0.0.0.1 Qaphela: olu hlalutyo lwenziwe ngeNest yase-US kunye nobushushu kwiidigri Fahrenheit.
1 Wonke amakhaya akrelekrele azakufuna isidleke
2 Ukufakwa ngokulula
3 Uyilo, i-ergonomics kunye nokuhamba
4 Inqaku elilungileyo: usetyenziso lweNest kunye ne-portal
5 Inqaku elibi: ayihambelani neHomekit
6 Isiphelo: Ngaba kufuneka ndiyithenge?
Qaphela: olu hlalutyo lwenziwe ngeNest yase-US kunye nobushushu kwiidigri Fahrenheit.
Wonke amakhaya akrelekrele azakufuna isidleke
Ukuba ne-thermostat efanelekileyo kuyimfuneko kuwo onke amakhaya apho i-automation yasekhaya iyaxatyiswa. Indlwane yenzelwe zonke iintlobo zabathengi, kodwa ngakumbi abo banqwenela ukusindisa. Kwikhaya lam, nezibane ezizenzekelayo, ii-TV ezikrelekrele ezingama-4K, kunye neeplagi ezilawulwayo ngefowuni, le nto ayenziwayo ayinakubakho. Ukuba ungumthandi wetekhnoloji, njengam, uya kuyivuyela.
Indlwane ibandakanya inkqubo efunda kwimikhwa yethu. Ingavakala ngathi igajethi iyasihlola, kodwa iyafunda kuthi ukwenza imeko-bume ibe ntle ngakumbi. Umzekelo, ukuba uvuka yonke imihla ngo-7 kusasa kwaye ungakuthandi ukubanda endlini ngelixa ulungiselela ukuya emsebenzini, ngokuqinisekileyo uvula umoya okwexeshana kwaye uwucime nje ngaphambi uyahamba. Ewe, emva kweentsuku ezininzi uguqula umoya oshushu ngo-7AM kwaye uwucime, yithi, ngo-8AM, Indlwane iqala ngokuzenzela zonke ezi zinto. Oko kukuthi, xa uvuka, ukufudumeza kuya kuvulwa ngokwakho kwaye kuya kucima xa uphuma emnyango, kuba ufunda kwimikhwa yethu. Awudingi ukuyicwangcisa (nangona inokwenziwa) kwaye, ukuba ukhetha imo ye-eco, iNest iya kuthatha isigqibo sokuba ngawaphi amaqondo obushushu afanelekileyo ekhayeni lakho ukuze ugcine. Eyona nto ndiyithanda kakhulu ngeNdlwane kukuba iyazi xa ndibuyela emsebenzini kwaye, kwezi ntsuku zasebusika, kuyavunywa ukuba iyakwamkela ngobushushu obuncinci bokukuhlalisa ekhaya ngokuzolileyo. Kungoku ke xa abafundi abangaphezu komnye beza kuthi "yimalini indlwane ekuhlawule ngayo ukuze ubhale le ngxelo", kodwa mfundi othandekayo, iNest ayihlawulanga apha. Indlwane, ngokwenene, iyamangalisa kweli candelo. Inezibonelelo zayo, kodwa ayikagqibeki, njengoko uya kufumanisa kancinci ukuhla.
Ngamaxesha la siqala ukungcangcazela xa kufika ityala lombane, Indlwane izimisele ukusinceda kwesi siselo singalunganga. Siyilawula njani le nto? KwiNest portal sifumana ingxelo eya kuthi ebonisa ukuba siwusebenzise kangakanani umbane yonke imihla. Xa sibona igqabi eliluhlaza likhanyiswe kwi-thermostat, oko kuthetha ukuba sigcina iikhilowathi. Ngokunyaniseka, ndifumana olu khetho lunomdla, ukulawula inkcitho, kodwa xa ityala lisiza kuwe kwaye nexabiso lombane lahlukile kakhulu, uyaqonda ukuba kunzima ukugcina inkcitho phantsi kolawulo.
Xa sele sithethile into ebalulekileyo, siya kwiinkcukacha malunga nokuba iNest injani imihla ngemihla, ukusuka ekufakweni kwayo ukuya kwimisebenzi yayo enomdla.
Uninzi luya kubuya umva xa lucinga ngokufaka i-thermostat entsha ekhaya. Ngapha koko, ndandingomnye wabo kuba andikaze ndilunge kwimisebenzi yezandla yasekhaya. Ngaphambi kokuba iNest ifike ezandleni zam, ndaye ndagqiba kwelokuba ndibukele zonke iintlobo zeevidiyo zokufaka kwiYouTube ukuqinisekisa ukuba ndiza kuba nakho ukuyifaka, nditshintsha i-thermostat yam yakudala. Uninzi lokuphononongwa kuvunyelwene ngento enye: Kulula ukuyifaka kwaye akufuneki ithathe ngaphezulu kwesiqingatha seyure.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuqinisekisa ukuba iNest iyahambelana nevolthi yakho, into onokuyijonga kwiwebhusayithi yenkampani. Ukuba kunjalo, akuyi kubakho ngxaki ukuyifaka. Khumbula kwakhona ukucima umbane emoyeni wendlu yakho ngaphambi kokuba uye emsebenzini. Susa i-thermostat yakho endala (qiniseka ukuthatha umfanekiso wazo zonke iingcingo), phawula iingcingo ngezitikha eziza neNest, emva koko uzincamathisele kwi-thermostat entsha.
Nanku apho inkohliso inokuthi ifike. Ukuba i-thermostat yakho endala ibotshwe ngokuthe ngqo eludongeni, kuya kufuneka ubeke enye endaweni yayo. Kodwa ukuba i-thermostat yakho ifihla umngxunya okanye ibhokisi yombane eludongeni, emva koko uya kunyanzelwa ukuba usebenzise ipleyiti emhlophe eza neNest. Ngelishwa, le yayiyimeko yam (nangona ingenzeki rhoqo). Ndiyayithanda indlela iNest ebukeka ngayo ibekwe eludongeni, ngaphandle kokuthintelwa okubonakalayo phakathi, kodwa i-hob isusa ukucokiswa okuthile kwi-smart thermostat. Ndibe nethamsanqa ukuba udonga lwam lube mhlophe njengoko lwalufana nolo lubhalwe kulo. Ukuba uzifumana ukwimeko efanayo, kodwa awutsalwa yibhodi eza neNdlwane, ungathenga eyahlukileyo (kukho iiwebhusayithi ezininzi ezithengisa iibhodi ezithile zeNest).
Eminye imicimbi kukuphinda ubuye umva, ukunamathela iintambo ezifanayo, kwaye iNest yakho iya kuvula. Kulapho uyakukuqonda ukuba intle kangakanani le thermostat, xa kuthelekiswa nebhokisi owawunayo ngaphambili eludongeni, Khange umhoye nokuhoya. I-Nest iya kukubuza imibuzo esisiseko, enje ngokuba yeyiphi inethiwekhi ye-Wi-Fi, kunye nezinye zinzima ngakumbi (uya kuba nemibuzo onokuyisombulula kwiscreen esinye). Kule meko, iNest ifuna ukuba ifikeleleke kuzo zonke iintlobo zabasebenzisi.
Uyilo, i-ergonomics kunye nokuhamba
Isizukulwana sangoku seNest (esesithathu, esinaso eSpain) siyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo: isinyithi, mnyama, mhlophe nobhedu, ukuze ukwazi ukuyilungelelanisa kuzo zonke iintlobo zeemeko kunye nokuhombisa onakho kwigumbi apho ufuna ukubeka khona. Kwimeko yam, ndikhethe imodeli yentsimbi, eyindabuko, kodwa enika indawo yokuhlala yam ukuba ijongeke ngakumbi, ngakumbi xa sijonga ukuba zonke iindonga zimhlophe. Ngenxa yoko, i-thermostat ibonakala (kwaye iindwendwe, ngasendleleni, ziyazi indlela yokuxabisa lo msebenzi wobunjineli banamhlanje).
Indlwane sisixhobo se-ergonomic. Emva konyaka ndihlala kwindlu endikuyo ngoku, bendingekazikhathazi ngokufumana indlela yenkqubo yam endala. Ndizamile amatyeli ambalwa kwaye andaphumelela. Nangona kunjalo, iNest ikumema ukuba ulinge kwaye ujongano lwayo lulula kakhulu. Iscreen sayo asibambeki, sihamba ngayo ngevili langaphandle. Ukuba siyiphendulela ngasekhohlo, siya kunciphisa iqondo lobushushu kwaye, ukuba siyiphendulela ngasekunene, siya kwandisa iidigri. Cinezela kwivili ukuqinisekisa ubushushu obufunekayo kwaye ukhethe ukuba sifuna ukwenza ubushushu, umoya opholileyo, imo yendalo okanye usete ubuncinci kunye nobushushu obuphezulu.
Enye into endiyithanda kakhulu malunga neNest kukuba iyakwazi ukubona ukuhamba kwam kwigumbi, apho ndibekwe khona. Abenzi boluvo bayo bandibona nakweyiphi na ikona kwaye bavula iscreen ukuze bandibonise imozulu (nangona ungayikhetha ukuze nawe ixesha lokubonisa kwifomathi ye-analog okanye yedijithali okanye ubushushu bangaphakathi). Olu khetho lunokuba nzima kakhulu ukuba igumbi lakho lokuhlala alikho likhulu kakhulu, kuba ngalo lonke ixesha uhamba phambi kweNest, isikrini siyajika.
Inqaku elilungileyo: usetyenziso lweNest kunye ne-portal
Enye ye Izimangaliso ezinkulu zeNest zifumaneka kwisicelo sayo esipheleleyo, Iyafumaneka kwezixhobo ze-Android neze-iPhone. Xa sivula isicelo seNest, asifumani ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-thermostat, kodwa sihlala kwiscreen sasekhaya esibonisa zonke izixhobo zohlobo lweNest esizifakileyo (unokuba nekhamera yokhuseleko okanye isixhobo sokutshaya umsi) .
Ukufikelela kwi-thermostat, cofa kwiqhosha elibonisa indawo ekuyo. Emva koko, kwiscreen esilandelayo sinokukhetha iqondo lobushushu esilifunayo ngalo mzuzu okanye sinokhetho lokulicima, ulicime okanye ulicwangcise ngokukhawuleza kwimizuzwana embalwa. Ndisebenzisa isicelo ikakhulu xa ndisiya kulala ebusuku. Kanye phambi kokuba ndilale, ndiyavula ndicime umoya. Ukusuka kwi-app efanayo sinokulawula inkcitho kunye nenkqubela phambili siphumelele kule nkalo. Ukusuka kwiwebhusayithi yeNest.com unokwenza imisebenzi efanayo. Ngale ndlela unokulawula i-thermostat naphi na.
Kule meko, i-thermostat yenza umsebenzi omkhulu. Ukongeza, inokudityaniswa nezinye izixhobo zeNest ukwenza inkqubo ukuba ibe lula ngakumbi (kodwa eli candelo aliloncedo kangako xa usebenzisa izixhobo ezinje ngeprogram ezenzekelayo). Umzekelo, ukuba unekhamera yeNest, unako Sebenzisa indawo okuyo ukwenza ukuba i-thermostat ivule ngokuzenzekelayo xa ungena endlwini.
Iimpawu ezintle ezivela kwiNest kweli candelo, nangona kunjalo, into ebalulekileyo ilahlekile ukufikelela kwimfezeko.
Inqaku elibi: ayihambelani neHomekit
Yilapho iNest iwela ngasemva. Kubonakala ngathi kwiAlfabhethi abanamdla wokwenza izinto zibe lula kubasebenzisi be-iPhone (yile nto imbangi ka-Apple inayo). Indlwane ayibonisi ukudityaniswa kweHomekit, ke asinakho ukuyiphatha kakuhle kwi-Apple ecosystem okanye ngemiyalelo yelizwi likaSiri.
Nangona kunjalo, ukuba unesithethi seAmazon Echo ekhaya, unako lawula ubushushu usebenzisa i-Alexa.
Isiphelo: Ngaba kufuneka ndiyithenge?
Ukuba une-thermostat ekhaya, impendulo icacile: ewe. Lixesha lokuba wenze umtsi kwisixhobo esi-smart eya kuqhuba usuku lwakho nosuku. Kulula ukuyifaka kwaye i-tech-savvy encinci iya kufunda ngokukhawuleza ukuyisebenzisa.
Ukongeza, unokufaka ii-thermostats ezininzi zeNest ekhaya (ukuba unezityalo ezininzi) kwaye uphathe nganye nganye. Ukuba kukho amalungu aliqela ekhaya, ngalinye linakho fikelela kwi-thermostat ngeakhawunti eyahlukileyo.
Ixabiso layo ngu 250 euro kwaye ungayithenga AphaKodwa ukuba uyakwazi ukulawula inkcitho, iya kuvela ibe lolona tyalo mali.
- kulula ukuyifaka
-Ungalawula ubushushu kwi-app yakho
-Ayikho indibaniselwano neHomekit
-Ayikwazi kulawulwa lilizwi (yi-Alexa kuphela)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uhlalutyo lweNest: iThermostat etshintshe iMigaqo yoMdlalo
[APK] Khuphela kwaye ufake ikhibhodi entsha yeXperia XZ yePrimiyamu kuyo nayiphi na i-Android
IMoto G4 Vs Moto G5, indaleko ngaphandle kwekhefu